musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » Vatakuri vendege dzeUS vakaonekwa mugwenga reChinese
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vatakuri vendege dzeUS vakaonekwa mugwenga reChinese.
Hukama hweUS-Chinese hwakadzikira zvakanyanya mumakore achangopfuura pamusoro penyaya kubva pakutengeserana nehusori kusvika kukurwisa kwehutsinye kweChina murusununguko rwedemokrasi muHong Kong uye kutyisidzira kweChina kuTaiwan.
China inovaka yakazara saizi yekusekesa yezvikepe zvehondo zvekuAmerica kuyedza zvombo zvayo zvekurwisa ngarava.
Kunyomba kwemutakuri wendege yeFord-kirasi yeUS uye vaviri vaparadzi vezvombo zveArleigh Burke-class vakaonekwa.
Aya marudzi ezvikepe zvehondo zveUS anogara achifamba pedyo nemvura yeChinese uye akatenderedza Taiwan.
The United States Naval Institute (USNI) yakaburitsa zvayaiti mifananidzo yesatellite yezvinangwa zvakazara muchimiro chemutakuri wendege yeFord-kirasi yeUS uye kanenge kaviri Arleigh Burke-kirasi inotungamirwa vanoparadza zvombo. Mifananidzo iyi yakapihwa nekambani yemifananidzo yepasatellite Maxar.
Idzo mhando dzezvikepe zvehondo zveAmerica zvinogara zvichifamba pedyo nemvura yeChinese nekutenderera Taiwan.
Mauto eChinese anga achivaka hukuru hwehupenyu hwezvikepe zvehondo zveUS munzvimbo yekuyedza missile, USNI report inoti.
Sekureva kweUSNI, chinangwa chakaita semutakuri chakatanga kuvakwa kurenje kurenje mudunhu reChina kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweXinjiang pakati paKurume naKubvumbi we2019, ndokuzobviswa zvakanyanya muna Zvita wegore iro. Kuvaka kwakatangazve mukupera kwaGunyana gore rino uye kwakapedzwa kutanga kwaGumiguru, tangi rekufunga.
Kunze kwechinangwa chikuru chakaita semutakuri, chirevo chakataura kuti kune dzimwe nzvimbo mbiri dzakatariswa dzakafanana nendege nekuda kwechimiro chadzo. Maxar akati saiti iyi ine zvibodzwa zviviri zvine rectangular dzinenge 75 metres (246 tsoka) dzakareba dzakaiswa panjanji.
Vatakuri vendege uye Arleigh Burke-class ships chikamu cheUS 7th Fleet, ine ngarava dzakafamba pedyo neChinese maritime miganhu, kusanganisira mvura dzakatenderedza Taiwan, uye kutora chikamu mukudhirowa kwechikepe neJapan, South Korea, uye Philippines.
Sekureva kwevanoongorora zvechiuto, nekuisa zvibodzwa munzvimbo yakajeka kune ekunze satellite, Beijing yaive "kuyedza kuratidza Washington izvo mauto ayo anopotsera."
Pavakabvunzwa nezvenyaya iyi nemusi weMuvhuro, mutauriri weChinese Foreign Ministry, VaWang Wenbin, vakati havazive nezvemishumo nezvemifananidzo yesatellite.
Muna Nyamavhuvhu 2020, China yakaedza DF-26 uye DF-21D marefu-refu ekurwisa ngarava, anonzi "vanouraya vatakuri" nevamwe vaongorori.
Hukama hweUS-Chinese hwakadzikira zvakanyanya mumakore achangopfuura pamusoro penyaya kubva pakutengeserana nehusori kusvika kukurwisa kwehutsinye kweChina murusununguko rwedemokrasi muHong Kong uye kutyisidzira kweChina Taiwan.